🥇 ▷ Haatan la heli karo hargaha cusub ee Rainbow Six Siege Pro League ✅
Haatan la heli karo hargaha cusub ee Rainbow Six Siege Pro League
Horaa loo helayaa Rainbow Six Siege hargaha cusub ee loo yaqaan ‘League League’. Kama hadlayno maqaarka kooxda ee ciyaarta ku jiray tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka hadda, Ember Rise, laakiin hargaha cusub ee League Pro in aad ka arki karto trailer soo bandhigid, kaas oo aan horey u soo helnay xilliyadii hore, iyo in markan ay yimaadaan afar xaraf: IQ, Nokk, Tachanka iyo Warden.
Maqaarradan ayaa waliba ku jira sidii amulet a Rainbow Six Siege chibi oo ka mid ah jilayaasha su’aasha suuxsan ee gashaday hargahood oo kale. Intaa waxaa sii dheer, waa in la ogaadaa in kiiska IQ, camouflage uu diyaar u yahay AUG (markaa waxay ikhtiyaar fiican u noqon kartaa haddii aad rabto maqaar aad u khaas ah oo hubkan ah, oo aan lagu soo darin shaashadda ugu wanaagsan ee Dabeecadda), iyo kiiska Nokk hubka loogu adeegsado qafiskiisa ayaa ah qorigiisa. Qorigaan waxaa lala wadaagaa hub ka mid ah Lesion iyo Ying, marka waxaad sidoo kale la wadaagi kartaan qafiska haddii aad jeceshahay inaad hubkan u isticmaashid wakiillada Shiinaha. Isla sidaas oo kale ayay u socdaan Warden iyo MPX, oo hadda leh barnaamijka ‘Pro League camouflage’, sidaa darteed Valkyrie sidoo kale way isticmaali kartaa.
Waxaan xasuusineynaa in wixii ka dambeeya qurxinta cusub ee ciyaarta lagu daray, Ubisoft ay hada diirada saareyso xalinta dhibaatooyinka kale ee farsamada, kuwaas oo saameyn ku yeeshay bilihii la soo dhaafay, sida weeraradii Rainbow Six Siege DDoS. Kuwani waa tallaabooyinka la qaado xilligan